ishushu kwaye ibanda ipakethe yejel
Ijeli inokubamba imo yayo, uyayiva loo nto?
Le sleeve icinezelweyo yomkhenkce yifomula ekhethekileyo yejeli eqinileyo kodwa eguqukayo. Ngelixa ezinye iigels zinamanzi, ukungqinisisa kwethu kwejel ngokungxamisekileyo ekonzakaleni kwaye ngekhe kushiye xa kusetyenziswa uxinzelelo. Iigels ezinamanzi aziyigubungeli indawo eyonzakeleyo kakuhle, ibaleka kude kube kuthe ncinane ...
Unyango lwendalo lwe-migraine kunye nomnqwazi womkhenkce
Uninzi lwabantu luneentloko kwangexesha, kodwa ayinguye wonke umntu ofumana uhlobo olufanayo lwentloko kwaye abanye abantu bafumana ngaphezulu kolunye uhlobo lwentloko. Intloko ye-Migraine luhlobo oluthile lwentloko ebangela ezinye iimpawu kunye nentlungu yentloko. Wazi njani ukuba une-migraine, nawuphi na umahluko ...
Uyikhulula njani i-carpal tunnel syndrome
ngendlela yendalo? Isifo seCarpal tunnel syndrome TS “CTS” a yimeko eqhelekileyo ebangela iintlungu, ukuba ndindisholo, kunye nokurhawuzelela isandla nengalo kuhlala kwenzeka kubantu abadala ingakumbi kumama obambe umntwana ubusuku bonke kwaye abanye abantu basebenza ekwenziweni, ekuthungeni, ekugqibeni. Ukucoca kunye ...
Ungajongana njani ne-plantar fasciitis
I-Plantar fasciitis sisifo esixhaphakileyo esidumbisayo. Izigulana azizukuhamba ngesiqhelo ngenxa yeentlungu zesithende. Le meko ibonakala kakhulu xa uphuma ebhedini kusasa, kodwa iimpawu ziya kukhululeka emva kokuhamba kangangexesha elithile. Nangona kunjalo, iintlungu ziya kuvela kwakhona ukuba ...
Iindaba ze-Expo Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.yinkampani ehlala iphuma ngaphandle ukuya kubona imarike kwaye iya kwimiboniso eyahlukeneyo eshushu ebandayo, enethemba lokuphanda ngeemfuno zabathengi zamvanje kwimithwalo yomkhenkce, emva koko ...
Umgaqo welayisi Unyango lweRICE lucetyiswa ngabaqeqeshi bezempilo ukuba unyango lwangaphambi kokulimala kwethambo okanye ukwenzakala okunamandla kwezicubu ezinje ngomqolo okanye ubunzima.Ingaba luncedo kukonzakala kwezemidlalo, ukwaphuka okuvaliweyo, kunye ...
Unonophelo lwasemva kokubeleka
Unonophelo lwasemva kokubeleka Ukukhulelwa, ukubeleka kunye nokuhanjiswa kunokugcwaliswa ngeemvakalelo zomlingo Ukwazi umntwana wakho emhlabeni kwaye emva nje kokuba ezelwe kunokubamba ngokwenene ezinye zeenkumbulo ezizodwa oza kuhlala usondele ...
Indlela yokujongana nokukhupha izinyo
Indlela yokujongana nokukhupha izinyo Kwiinkqubo ezininzi zokukhupha izinyo, ngakumbi emva kwamazinyo obulumko okanye i-mandibular cysts, oogqirha baya kugxininisa ngokuphindaphindiweyo kwisicelo sokubanda (umkhenkce) ukukhupha ukudumba kwasemva kokusebenza, kunye ...